Tsy maintsy akanjo vita amin'ny vehivavy
Boutt Butt Lifter Shapewear
Fitaovana fanaraha-maso Tummy
Fanamasoana amin'ny makiazy miaraka amin'ny Tummy Control
Buckle Bra Extension
Ny Kianja Fanitarana Nylon Bra
Shapewear ankehitriny dia fiantsoana lavitra be avy amin'ny akanjo nitaovan'ny reninay. Izy ireo dia mitafy sy ankalazain'ny maro kintana sy celebs ary voafaritra tsara ho an'ny isaky ny kabine.Inona? Fa maninona no mitafy bikao?
Na fety io, fitafy na orinasa dia mety hanova ny fijery ankapobeny ary hampiakatra ny fahatokisanao azy. Betsaka ny tombontsoa azo amin'ny fanaovana forme satria manampy ny contour amin'ny vatana, indrindra rehefa miezaka ny hahitana ny fomba fijery tsara indrindra ianao alohan'ny hahatongavany hetsika lehibe. Ankoatr'izay, ny mijery tsara dia zava-dehibe foana mba hahatonga fahatsapana eo amin'ny fiaraha-monina. Izy io dia karazan-dasam-batana izay manamboatra ny feny, ny valahany, ny valahany ary ny masin-damosina. Ny iray amin'ireo tombony lehibe indrindra amin'ny fanamboarana shapewear dia ny fanaovana Silhouette vehivavy. Miaraka amin'ny shaper mety, dia ho vitanao ny tonga lafatra hourglass tonga lafatra miaraka amin'ny fitarainana ny akanjo.
Ny tombony farany amin'ny endrika amina endrika sy ny antony malaza indrindra amin'ny fananganana formewear dia endrika malefaka kokoa. Misy akanjo endrika miendrika amin'ny faritra rehetra ao amin'ny vatana hanampy azy ireo ho malefaka kokoa.
Mafy ny vatam-pahefana mifehy ny vatanao:
Famolavola lakaoly manjelatra amin'ny satroka.Tsy mihodina, lava be mba handrakofana ny valahanao ambany ary tsy ho hita maso eo ambanin'ny akanjonao. ny valahanao, mifehy ny havizanao ary manenjana ny valahanao, super elasticity ary malefaka, tsy mahatsapa fameperana.Tokony itony hatsangana ny fehin-kibo momba ny vatanao mba hampisehoanao ny fahatokisanao azy.
Ny mpanondrana tsimokaretina Slimming dia manana endrika mahay, izay mamela ny efitraninao sy ny andilana mahomby, tsy manelingelina ny andilana izany ary hanome rakotra feno ny pensilihazo, ary mamorona pataloha bàla, miaraka amin'ny endrika 3D-hips mampisongadina ny toe-javatra mivaingana, manampy anao hanangana fefy peach, manampy ny volanao hahita tsara sy mivaivay.
Manomeza am-baravarankely amam-baravarankely ihany koa enhencer padging pissement manana pataloha 4 izay azo esorina hipetaka ny pataloha sy ny sisiny mba hanakanana ireo tsipika eo ambanin'ireo kiraro, pataloha, pataloha, legg na akanjo. Mahatonga ho faribolana lehibe sy tena boribory ny faritaninao ambany sy buttox.
Fahasoavana sy fahanterana
Rehefa mihalehibe isika dia mizaka ny fizotran'ny fahanterana ny vatantsika. Tena voajanahary izany. Ny shapewear ho an'ny vehivavy dia manampy ny vatana hahazoana fanohanana sy miaro ny fihenan-doha, ny fisaka amin'ny tratra, ny prolaps amin'ny tratra, ny valahana fantsona, ny andilana, ny faniriana fanta-daza, ny tongotra mifono, ny tongony be, ary ny maro. Ankoatr'izay, ny vehivavy mijaly amin'ny ranon-dra dia afaka mahazo tombony ihany koa amin'ny fanomezana endrika satria manome fihenam-bidy kely izy miaraka amin'ny fanohanana mety. Ny ampahany tsara indrindra dia amin'ny alàlan'ny lamba maoderina, manampy be dia be ihany koa amin'ny hetsika mampihena lanja.
Fanatsarana ny hozatry ny poste sy ny kibo
Ny shapewear ho an'ny vehivavy dia manana elastika mahazatra, ary noho izany dia manome fahatsiarovana ary manohana ny lamosinao. Mahatonga ny vatanao mahitsy sy hentitra kokoa. Izy io koa dia manampy amin'ny fanamaivanana ny fanaintainana eo amin'ny faritra ambany sy lumbar faritra. Manatsara ny fiainanao sy ny fipetrahanao izany. Ankehitriny, ny ankamaroan'ny olona dia mety hieritreritra fa ny miendrika bika dia afaka mitafy ihany raha toa ka voasarona akanjo lava ny vatana. Eny, tsy misy fitsipika toy izany, ary noho izany, dia azo anaovana eo ambanin'ny sarees koa izy. Ny mpivarotra dia tonga lafatra amin'ny tovovavy izay te-hita eo amin'ny akanjony mialoha ny fitondrana vohoka.
Efitra 2907, tranobe eran-tany, làlana faha-6, Yiwu, Zhejiang, Sina